မြန်မာလူငယ်များ သေချာမှု ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » မြန်မာလူငယ်များ သေချာမှု ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီ
မြန်မာလူငယ်များ သေချာမှု ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီ
Posted by khunmyomyat on Apr 28, 2010 in Other - Non Channelized | 8 comments
လူငယ်သည် တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ် ဖြစ်သည်။ “ ယနေ့လူငယ်…နောင်ဝယ် လူကြီး ” ဆိုသည့် မြန်မာ စကားပုံ ရှိသော်လည်း အသက်ကြီး၍သာ လူကြီး ဖြစ်သွားပြီး ပညာရင့်ကျက်ခြင်း ၊ စိတ်ထားပြည့်ဝခြင်း အစရှိသည့် အချက်အလက်များဖြင့် ပြည့်စုံလုံလောက်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ကြပါ။
တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်သည် လူငယ်များ၏ လက်ထဲတွင် မှီခိုနေသည်ဟု လူကြီးများက မည်သို့ပင် ပညာပေး ဆုံးမစေကာမှု..ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်များသည် အပျော်အပါးမပျက် ၊ အသောက်အစားမပျက် ရှိမြဲအတိုင်းသာ ရှိနေကြသည်။ မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိသနည်း။ အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ၁၀ တန်းအောင် ကျောင်းသား တစ်ယောက်အတွက် ကျောင်းများတက်ရောက်ရန် အခွင့်အလမ်း ရှိသော်လည်း ဘွဲ့ရ တစ်ယောက်အတွက်မှု အလုပ်အကိုင် ရရှိနိင်ရန် မြန်မာနိင်ငံ အနေဖြင့် ၁၀ စုနှစ်ကျော်စွာ ရှားပါးနေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ရှိနေသော အသက်အရွယ်နှင့် ရထားသော ဘွဲ့ပညာတို့သည် အမှန်တကယ် တက်မြောက်ပါရဲ့လား ၊ ထို ဘွဲ့ပညာ တို့အား အသုံးချရန် နေရာဌာန ရှိပါသလား ၊ ၄င်းဌာနတွင် တက်မြောက်ထားသည့် ပညာဖြင့် လုပ်ကိုင်၍ ရရှိလာသော ခံစားမှုသည် ထိုက်တန်ပါရဲ့လား ဟု ဆိုလျှင် ….အဖြေသည် “ နိး ” တခုထဲသာ ရှိနေပေသည်။ ထိုအခါ မရေရာ မသေချာမှု ဖြစ်နေသော အခြေအနေတွင် လူငယ်များ ကြိုးစားလိုသည့် စိတ်များ ကုန်ဆုံးနေခဲ့ကြပါသည်။ အခြေအနေအရ ၊ မိဘဆန္ဒအရ လိုက်ပါလုပ်ဆောင်နေရသော်လည်း အားကျိုးမာန်တက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိကြတော့ပါ။ တိုင်းပြည်၏ အဘက်ဘက်မှ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု ၊ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှု ၊ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှု များဖြင့် အလုံးစုံ ရောပြွန်းနေသော ခေတ်ကြီးတွင် လူငယ်များ အလေအလွင့် များနေကြပါသည်။ အနာဂတ်အတွက် ရည်ရွယ်၍ လမ်းလျှောက်သူသည် အလေအလွင့် လူငယ်များထက် အဆမတန် နည်းပါးနေကြသည်ကို စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့မြင်နေရပါတော့သည်။
ရောမမြို့ကြီးတောင် တစ်ရက်တည်း တည်ဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေ
ဘွဲ.ရတာနဲ.အလုပ်အကိုင်တစ်နေရာရတာကို ခွဲထားနိုင်မှအဆင်ပြေမယ် စိတ်သက်သာရာ ရပါမယ်။
ကျနော်တို.က ဘွဲ.ရတယ် တကယ်မတတ်ဘူး အလုပ်လဲမရဘူးဆိုတာကိုစိတ်နာနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘဲနစ်နာပါတယ်။
တန်တာမတန်တာ အပထားရသောအလုပ်တစ်ခုကိုဝင်လုပ်မယ်ဆိုရင် အတွေ.အကြုံကောင်းတွေရနိုင်ပါတယ်။
လောက မှာ အတတ်ပညာနဲ.လုပ်စားနိုင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဝါသနာနဲ. ထမင်းရှာစားတဲ.အလုပ်ထပ်တူကြရင်အကောင်းဆုံးပေါ.။
ကျနော်.အမြင်ကတော. ခေတ်ကို အပြစ်တင်နေမယ်.အစား စိတ်ညစ်နေမယ်.အစား လုပ်နိုင်တာလေးကိုဘဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည်.စေချင်ပါတယ်နော်။
လုငယ်တွေဟာ ခေတ်နဲ့စံနစ်ကိုလည်း ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တည့်တည့်ပြောရရင် လူငယ်တွေပြင်ပေးမှပဲ မြန်မာပြည်အနာဂတ်ကောင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်
တချို့ကလည်း ကိုယ်လျှောက်မဲ့လမ်းအပေါ်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတာလည်းရှိတယ် ။ အခြေနေမပေးတာလည်းရှိတယ် ။ ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရတဲ့ဘ၀မှာ ဖြစ်သလိုပဲနေကြရင်းကနေ ပေတေလေလွင့်တဲ့လူများလာတာပါ ။
It is not our fault…………..
Because of stupid guys who treated us like prisoners.
I am the student of University of Computer Studies Yangon, huh , that university is pretty like as the Insein Jail, if you don’t believe , come and see it , Always Welcome.
The man who is good , that depends on him.
The man who is bad , that depends on him.
The followers are bad , that depend on leader.
The leader is bad , that effects on the followers.
တချို့လဲ ဒီလိုအခြေအနေကနေ အောင်မြင်နေကြတာပဲ